China onye na-akọwapụta BT-9803 Onye na-emepụta ihe na ngwaahịa | BGT
Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9803
BT-9803 bụ uka n'ire ụdị Chloro DBS. O nweghị kemịkal nke viscosity, ya mere ọ dị mfe maka nhazi ma ọ gaghị arapara n’otu ahụ.
Enwere ike iji ya na PP na LLDPE.
BT-9803 bụ ogo dị mma nke Chloro-DBS Clarifying Agent nwere arụmọrụ dị elu na enweghị viscosity n'oge nhazi.
Nwere ike belata haze ma mee ka ihe doo anya nke polypropylene.
Nwere ike dịkwuo okpomọkụ na-eguzogide, nke mere na eyi ngwaahịa ike ga-eji na ngwa ndakwa nri oven.
Nwere ike melite ịdị elu nke ngwaahịa ndị agwụla.
Nwere ike ime ka nkwalite nke akụkụ a kpụrụ akpụ na obere oge okirikiri n'oge usoro ịkpụzi.
Ọ dị mma maka ịkpọtụrụ nri na ngwa ahụike.
BT-9803dị elu dị irè Clarifying Ukwu maka polypropylene homopolymer ， random copolymer. Ọ nwere ike na-agwakọta ozugbo na eyi ihe na ngwa ma ọ bụ mee transperent masterbatch tupu iji. Ọ nwere ike na-enye nghọta dị elu, na-abawanye nguzo ọkụ ma na-eme ka igwe dị mma,. A ga-etinye kemịkalụ ọkwa ahụ n'ọrụ na nsị mgbidi dị mkpụmkpụ, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ extrusion, ịkpụzi ịkpụzi na ntụgharị ntụgharị.
Na-eduga n'ahịa ịkpụzi ọgwụ, enwere ọtụtụ ngwaahịa nwere ike mepụta, gụnyere housewares, okwu nchekwa, okwu ikpe ndụ, obere akpa mgbidi na sirinji nwere ike iwepụ na karama polypropylene kpụchara karama maka ọgwụ, ngwa nri, juices, sauces, vitamin, na karama nwa. .
Enwere ike iji ya na PP na LLDPE
Nucleating gị n'ụlọnga bụ ụdị ihe nnọchianya nke kwesịrị ekwesị maka plastik kristal ezughị ezu dị ka polypropylene na polyethylene. Site na-agbanwe agbanwe crystallization omume nke resin na mee ngwangwa crystallization ọnụego, nwere ike nweta nzube nke shortening na ịkpụzi okirikiri, ịba ụba uzo gloss, rigidity, thermal deformation okpomọkụ, ike ọdụdọ na mmetụta na-eguzogide nke okokụre ngwaahịa.
Polymer gbanwetụrụ site Ngwunye Ngwunye, Ọ bụghị naanị na-eme ka njirimara mbụ nke polymer, kamakwa nwere oke ọnụahịa arụmọrụ karịa ọtụtụ ihe nwere arụmọrụ nhazi dị mma na ọtụtụ ngwa. Iji Ngwunye Ngwunye na polypropylene ọ bụghị naanị dochie iko, kamakwa dochie ndị ọzọ polymer dị ka PET, HD, PS, PVC, PC, wdg maka ịme nri nkwakọ ngwaahịa, ihe gbasara ahụike, isiokwu ọdịbendị maka iji ụbọchị, na-akọwapụta akwụkwọ mpịachi na ihe ndị ọzọ dị elu.
Nke gara aga: Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9805
Osote: Odido Remover
Na-akọwapụta Onye Ọrụ Site na China
Na-akọwapụta Onye na-emepụta ihe
PP Onye na-akọwapụta ihe
Onye na-akọwapụta ihe na Sorbitol